Asetenam Nsɛm: Yɛyɛ Nea Yehowa Ka a, Yenya Nhyira Pii | Olive Matthews
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Yɛyɛ Nea Yehowa Ka a, Yenya Nhyira Pii
Olive Matthews anom asɛm
Asafo no kae sɛ me ne me kunu, ne me nuabarima ne ne yere nkɔyɛ adwuma bi. Ɛhɔ ara na yɛkae sɛ, “Yɛbɛyɛ!” Adɛn nti na yɛpenee so, na sɛn na Yehowa hyiraa yɛn? Ma minni kan nka me ho asɛm kakra nkyerɛ wo.
WƆWOO me afe 1923 wɔ Hemsworth. Ɛyɛ kurow bi a ɛwɔ Yorkshire, England. Ná mewɔ nuabarima panyin a yɛfrɛ no Bob. Bere a midii mfe nkron no, Paapa nyaa nhoma bi a ɛka sɛnea atoro som adaadaa nnipa ho asɛm. Ná Paapa ani nnye nyaatwom a ɛwɔ asɔre ahorow mu no ho. Enti nhoma no mu nsɛm a ɔkenkanee no kaa ne koma paa. Mfe bi akyi no, Bob Atkinson baa yɛn fie, na ɔbɔɔ Onua Rutherford kasa a ɛwɔ gramafon apaawa so kyerɛɛ yɛn. Yehui sɛ wɔn a wɔyɛɛ nhoma a me papa kenkanee no, wɔn ara na wɔmaa ɔkasa yi nso! M’awofo ka kyerɛɛ Onua Atkinson sɛ anwummere biara ɔne yɛn mmedidi. Ɔba a, Bible mu nsɛmmisa biara a yɛwɔ no, wayi ano ama yɛn. Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ yebetumi akɔ adesua wɔ onua bi fie. Efi yɛn fie kɔ hɔ no, emu twe kakra. Ntɛm ara na yefii ase kɔe, na yɛtew asafo ketewa bi wɔ Hemsworth. Afei yefii ase gyee dantaban asomfo (seesei yɛfrɛ wɔn amansin so ahwɛfo) kɔɔ yɛn fie; akwampaefo a wɔwɔ yɛn mpɔtam hɔ nso, na yɛfrɛ wɔn ma wobedidi. Saa anuanom no fekubɔ boaa me paa.
Saa bere no, na yɛn abusua no abue adwuma bi. Nanso Paapa ka kyerɛɛ me nuabarima no sɛ, “Sɛ wopɛ sɛ woyɛ akwampae adwuma a, saa adwuma yi, yebegu no.” Bob gye toom, na ɔkɔyɛɛ akwampae adwuma no wɔ baabi; na wadi mfe 21. Mfe mmienu akyi, bere a midii mfe 16 no, me nso mebɛyɛɛ ɔkwampaefo. Edu Memeneda ne Kwasida a, na minya afoforo ne wɔn kɔ asɛnka, nanso nna a aka no deɛ, me nko ara na na metaa kɔ. Ná mede adansedi krataa ne gramafon na ɛtaa yɛ asɛnka adwuma no. Yehowa boaa me ma minyaa Bible suani a na ɔbɔ mmɔden paa. Akyiri yi, saa Bible suani no abusuafo bebree gyee nokware no. Afe a edi hɔ no, wɔpaw me ne Mary Henshall sɛ akwampaefo titiriw. Wɔde yɛn kɔɔ Cheshire mantam mu sɛ yɛnkɔyɛ adwuma wɔ asasesin a wɔmfa nhyɛɛ obiara nsa mu.
Saa bere no, na Wiase Ko II no gyina mu denneennen, na na atumfoɔ no pɛ sɛ mmea kɔyɛ adwuma de boa ɔko no. Ɔsom afoforo mufo a wɔkyerɛ sɛ wɔde wɔn bere nyinaa yɛ Onyankopɔn adwuma no, na wɔpene so sɛ mma wɔnkɔ ɔko. Enti yɛn nso a yɛyɛ akwampaefo titiriw no, na yɛhwɛ kwan sɛ wɔbɛyɛ saa ara ama yɛn. Nanso atemmufo no ampene so, enti wobuu me fɔ sɛ menkɔda afiase nnafua 31. Afe a edi hɔ no, bere a midii mfe 19 no, mekyerɛw me din sɛ me gyidi nti merenkɔ ɔko. Wɔde me kɔɔ asɛnnibea mmienu anim, nanso wɔma mefaa me ho dii. Nea mefaa mu yi nyinaa no, na minim sɛ honhom kronkron reboa me, na na Yehowa kura me nsa mu rehyɛ me den.—Yes. 41:10, 13.
MINYAA OBI FOFORO A ME NE NO BƐBƆ BRA
Mihyiaa Arthur Matthews afe 1946. Arthur ankɔ ɔko nti, na wakɔda afiase abosome mmiɛnsa. Bere a woyii no no, ɔkɔɔ ne nua Dennis nkyɛn wɔ Hemsworth. Ná Dennis yɛ ɔkwampaefo titiriw. Wɔn mmofraase pɛɛ na wɔn papa de Yehowa ho dɔ duaa wɔn mu, na wɔbɔɔ asu no na wonnya nnii mfe 20. Ankyɛ koraa na woyii Dennis kɔɔ Ireland, na ɛkaa Arthur nko ara wɔ Hemsworth. Ná Arthur yɛ ɔkwampaefo mmɔdenbɔfo, enti na m’awofo ani gye ne ho paa. Wei nti, wɔma ɔne wɔn bɛtenae. Sɛ mekɔsra m’awofo na yedidi wie a, ɛyɛ a me ne Arthur ka sɛ yɛbɛhohoro nkyɛnsee mu. Ewiee ase no, na yedi nkrataakyerɛw. Afe 1948 no, wɔsan de Arthur too afiase abosome mmiɛnsa. Yɛwaree January 1949. Ná yɛn botae ne sɛ yɛbɛyɛ bere nyinaa som adwuma no akosi bere biara a ɛbɛyɛ yiye. Ná yɛhwɛ yɛn sikasɛm yiye. Yɛn ahomegye bere nso, na yekodi paa tetew nnuaba. Enti Yehowa boaa yɛn ma yetumi kɔɔ so yɛɛ akwampae adwuma no.
Yɛwɔ Hemsworth; yɛn ayeforohyia akyi, afe 1949
Afe baako akyi no, wɔka kyerɛɛ yɛn sɛ yɛnkɔ Northern Ireland. Wodii kan ma yɛkɔɔ Armagh, na akyiri yi wɔma yɛkɔɔ Newry. Saa nkurow mmienu yi nyinaa, na Katolek som agye ntini wɔ hɔ. Ná mpɔtam hɔ nnwo koraa, enti sɛ yɛne nkurɔfo rebɔ nkɔmmɔ a, na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye paa na yɛyɛ anifere. Ná yɛyɛ adesua wɔ onua bi ne ne yere fie. Wufi baabi a yɛte rekɔ hɔ a, na ɛyɛ akwansin du (kilomita 16). Bɛyɛ nnipa nwɔtwe na na wɔba nhyiam no. Ɛtɔ da a, na wɔma yɛda hɔ ma ade kye. Ɛyɛ a yɛda fam, na ade kye a yedidi ma yɛn ho bae yɛn. Seesei ɛyɛ yɛn dɛ paa sɛ Adansefo bebree wɔ mpɔtam hɔ.
Ná me nuabarima ne ne yere Lottie yɛ akwampaefo titiriw wɔ Northern Ireland. Afe 1952 no, yɛn baanan nyinaa kɔɔ ɔmantam nhyiam wɔ Belfast. Onua bi yii ne yam gyee yɛn kɔɔ ne fie; na Pryce Hughes nso ka ho. Ɔno na na ɔyɛ Britain baa dwumadibea somfo. Woyii nhomawa bi adi, na yɛbɔɔ ho nkɔmmɔ anadwo bi. Edin a na ɛda so ne God’s Way Is Love (Onyankopɔn Kwan Yɛ Ɔdɔ). Irelandfo titiriw nti na wɔyɛe. Onua Hughes kae sɛ ɛyɛ den sɛ wubenya Katolekfo aka asɛm no akyerɛ wɔn wɔ Irish Republic. Ná wotu anuanom fi baabi a wɔte, na na asɔfo no piapia nkurɔfo ma wɔyɛ anuanom basabasa. Pryce kae sɛ: “Yehia awarefo a wɔwɔ kar ama wɔakɔyɛ ɔsatu titiriw akyekyɛ nhomawa no wɔ ɔman no mu baabiara.” * Ntɛm ara na yɛkae sɛ, “Yɛbɛyɛ!” Ɛno na midii kan kae wɔ m’asɛm no mfiase no.
Me ne akwampaefo foforo; yɛte moto bi a adaka bɔ ho mu
Ofie baako a na akwampaefo mpa hɔ da wɔ Dublin yɛ Ma Rutland fie. Ɔyɛ onuawa a na ɔde mfe pii asom Yehowa nokware mu. Yɛn baanan nso kodii nna kakra wɔ hɔ, na yɛtɔn yɛn ho nneɛma bi wɔ hɔ. Ná Bob wɔ moto bi a adaka bɔ ho. Da bi, yɛn nyinaa tenaa mu sɛ yɛrekɔhwehwɛ kar atɔ. Yenyaa kar dedaw bi nanso na ɛwɔ ahoɔden. Ná yɛn mu biara nnim karka, enti yɛka kyerɛɛ nea yɛtɔɔ kar no fii ne nkyɛn sɛ ɔmfa mmrɛ yɛn wɔ fie. Saa anwummere no, Arthur tenaa mpa so dannan ne nsa te sɛ nea ɔrekyinkyim kar gear. Ade kyee no, Arthur yɛe sɛ ɔrekoyi kar no afi baabi a na esi no. Prɛko pɛ na Mildred Willett (a akyiri yi ɔwaree John Barr no) bepuee hɔ. Ná onim karka! Ɔboaa yɛn ma yesuaa karka, enti afei deɛ na yɛayɛ krado sɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ adwuma no!
Yɛn kar ne yɛn dan a kar twe
Afei, na aka baabi a yɛbɛda. Ná anuanom aka akyerɛ yɛn sɛ mma yɛntena ɔdan a kar twe mu, efisɛ wɔn a wɔmpɛ yɛn asɛm betumi atwa gya ato mu. Enti yɛhwehwɛɛ dan, nanso yɛannya bi. Saa anadwo no, yɛn baanan nyinaa daa kar no mu. Ade kyee no, nea yenyae ara yɛ ɔdan ketewaa bi a kar twe; ɛno na yɛde yɛɛ yɛn fie. Nea na ɛwom yɛ mpa a ɛbɔ so mmienu. Ná akuafo bi a wɔn yam ye ma yɛde yɛn fie no si wɔn asase so. Anwonwasɛm ne sɛ, yɛanhyia ɔhaw biara. Ná yegyaw yɛn fie no hɔ twa kwan kwansin 10 kosi 15 (kilomita 16 kosi 24) kɔka asɛm no. Afei, sɛ yefi hɔ kɔ baabi foforo a, akyiri yi na yɛsan ba baabi a yɛde yɛn fie no si no bɛka asɛm no kyerɛ mpɔtam hɔfo.
Yɛkɔɔ fie biara mu wɔ Irish Republic anafo a yɛanhyia ɔhaw biara. Yɛkyekyɛɛ nhomawa 20,000, na nkurɔfo a wɔkyerɛɛ asɛm no ho anigye no, yɛde wɔn din kɔmaa Britain baa dwumadibea. Ɛnnɛ Adansefo pii wɔ saa mpɔtam hɔ. Wei yɛ nhyira kɛse paa!
YƐSAN KƆƆ ENGLAND, NA YEFI HƆ KƆƆ SCOTLAND
Bere bi akyi no, wɔsan de yɛn kɔɔ London anafo. Nnawɔtwe kakra akyi no, Britain baa dwumadibea frɛɛ Arthur wɔ tɛlɛfon so ka kyerɛɛ no sɛ ade kye a, ɔnkɔyɛ ɔmansin sohwɛfo! Wɔmaa yɛn ntetee nnawɔtwe baako, na ɛno akyi no, yɛkɔɔ yɛn mansin mu wɔ Scotland. Enti Arthur annya bere foforo biara a ɔde besua ne kasa, nanso na wayɛ krado sɛ adwuma biara a wɔde bɛma no wɔ Yehowa som mu no, ɔbɛyɛ. Ne nhwɛso no hyɛɛ me nkuran paa. Nokwasɛm ne sɛ, yɛn ani gyei wɔ ɔmansin adwuma no mu. Ná yɛayɛ adwuma wɔ asasesin a wɔmfa nhyɛɛ obiara nsa mu mfe kakra, nanso afei deɛ na yehu anuanom mmarima ne mmea bebree. Enti na wei yɛ nhyira kɛse.
Afe 1962 no, wɔtoo nsa frɛɛ Arthur sɛ ɔnkɔ Gilead Sukuu abosome du. Ná wei yɛ gyinae kɛse a ɛsɛ sɛ yesi. Ná merentumi ne no nkɔ, efisɛ wɔanto nsa afrɛ me. Nanso yesii gyinae sɛ ɛyɛ papa sɛ Arthur bɛkɔ sukuu no. Ná ɛbɛka me nko ara, enti wɔmaa mesan kɔɔ Hemsworth sɛ menkɔyɛ ɔkwampaefo titiriw. Afe baako akyi, bere a Arthur san bae no, wɔma yɛkɔyɛɛ ɔmantam adwuma wɔ Scotland, England atifi fam, ne Northern Ireland.
YENYAA DWUMADI FOFORO WƆ IRELAND
Afe 1964 no, Arthur nyaa dwumadi foforo sɛ ɔnkɔyɛ baa dwumadibea somfo wɔ Irish Republic. Nsakrae a ɛbae no, mfiase no, na ɛnyɛ me dɛ efisɛ na yɛn ani gye akwantu adwuma no ho. Mitwa m’ani hwɛ m’akyi a, seesei m’ani sɔ sɛ manya hokwan resom wɔ Betel. Sɛ w’ani nnye adwuma bi ho mpo na sɛ wugye tom sɛ wobɛyɛ a, migye di sɛ sɛnea ɛte biara Yehowa behyira wo. Mekɔɔ Betel no, meyɛɛ ɔfese adwuma, mehyehyɛɛ nhoma, menoaa aduan, na misiesiee dan mu. Yɛyɛɛ ɔmantam adwuma nso kakra, enti yehyiaa anuanom wɔ ɔman no mu baabiara. Yɛn Bible asuafo nso nyaa nkɔso. Wei maa yɛne anuanom a wɔwɔ Ireland nyaa abusuabɔ a emu yɛ den. Nhyira a ɛso bi nni bɛn ara ni!
NHYIAM A ƐDE NKƆSO KƐSE BAA YEHOWA ADANSEFO SOM MU WƆ IRELAND
Amanaman ntam nhyiam a edi kan a yɛyɛe wɔ Ireland no, yɛyɛɛ no afe 1965, wɔ Dublin. * Yehyiaa ɔsɔretia a emu yɛ den, nanso nhyiam no kɔɔ yiye paa. Nnipa 3,948 na ɛbae, na nnipa 65 na wɔbɔɔ asu. Anuanom 3,500 a wofi aman ahorow so bae no tenaa nkurɔfo fie. Baa dwumadibea no kyerɛw krataa kɔdaa ofiewura biara ase. Afiewuranom nso, suban pa a anuanom daa no adi no, wɔkamfoo wɔn. Anokwa, ɛde nkɔso kɛse baa Ireland.
Arthur rekyia Nathan Knorr bere a ɔbaa ɔmantam nhyiam afe 1965
Arthur reyi Me Nhoma a Ɛka Bible Mu Nsɛm adi wɔ Gaelic kasa mu, afe 1983
Afe 1966 no, wɔmaa baa dwumadibea a ɛwɔ Dublin no hwɛɛ ɔsom adwuma a wɔyɛ wɔ atifi fam Ireland ne anafo fam Ireland nyinaa so. Ná saa baakoyɛ yi yɛ soronko koraa efisɛ na ebi nni amanyɔfo ne nyamesomfo a wɔwɔ supɔw no so mu. Katolekfo pii baa nokware no mu, na wɔne anuanom a kan na wɔyɛ Protestantfo boom somee. Wei maa yɛn ani gyei paa.
YƐN DWUMADI SESAE KORAA
Afe 2011 no, wɔkaa Britain ne Ireland baa dwumadibea boom, enti wɔde yɛn kɔɔ London Betel. Wei maa nneɛma sesae koraa wɔ yɛn asetena mu. Saa bere no, na midwen Arthur ho paa efisɛ na yare bi a wɔfrɛ no Parkinson abɔ no. May 20, 2015 no, me kunu a na me no abɔ bra mfe 66 no wui.
Mfe kakra a atwam no, ɛyaw, adwinnwen, ne awerɛhow ahyɛ me so. Bere bi a atwam no, Arthur ara na na okurakura me nkakrankakra. M’ani agyina no paa! Sɛ wofa tebea a ɛte saa mu a, ɛma wobɛn Yehowa kɛse. Afei nso, mahu sɛ na afoforo dɔ Arthur paa, na wei aka me koma yiye. Anuanom a wɔwɔ Ireland, Britain, ne United States mpo akyerɛw me. Saa nkrataa yi ne nkuranhyɛ a manya afi Arthur nuabarima Dennis, ne yere, Mavis, ne me nuabarima mma Ruth ne Judy hɔ aboa me paa. Minhu nea menka mpo.
Kyerɛwsɛm a ahyɛ me nkuran paa yɛ Yesaia 30:18. Ɛka sɛ, ‘Yehowa twɛn sɛ ɔbɛboa wo, na ɔbɛma ne ho so ahu wo mmɔbɔ. Yehowa yɛ atemmu Nyankopɔn. Anigye ne wɔn a wɔtwɛn no.’ Mahu sɛ Yehowa retwɛn sɛ obesiesie nneɛma na wama yɛn adwuma a ɛbɛma yɛn ani agye wɔ wiase foforo no mu. Wei akyekye me werɛ paa.
Sɛ mitwa m’ani hwɛ yɛn asetena a, mihu sɛ Yehowa akyerɛkyerɛ yɛn na wahyira asɛnka adwuma no so wɔ Ireland! Ɛyɛ me dɛ paa sɛ manya hokwan ayɛ biribi ketewaa bi wɔ ɔsom adwuma no mu. Ɛyɛ nokware paa sɛ, sɛ yɛyɛ nea Yehowa ka sɛ yɛnyɛ a, sɛnea ɛte biara obehyira yɛn.
^ nky. 12 Hwɛ 1988 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, kr. 101-102.
^ nky. 22 Hwɛ 1988 Yearbook, kr. 109-112.